Sargaal Katirsan Alshabaab Ayaa Isku Soo Dhiibay Maamulka Koonfur Galbeed – STAR FM SOMALIA
Sargaal Katirsan Alshabaab Ayaa Isku Soo Dhiibay Maamulka Koonfur Galbeed
Wararka ka imanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in gelinkii dambe ee shalay ay ka degtay diyaarad Helicopter ah taasoo uu saarnaa sarkaal la sheegay inuu ka soo goostay ururka Alshabaab.
Sarkaalkan oo aan magaciisa la shaacin isla markaana aan loo soo bandhigin saxaafada ayaa la sheegay in laga soo duuliyay magaalada Diinsoor oo ka mid ah gobolka Bay.
Cabdulle Isaaq oo ka tirsan ciidamada Koofur Galbeed ayaa u xaqiijiyay saxaafada isa soo dhiibista sarkaalkan hore ugaga tirsanaa Alshabaab.
Wararka ayaa waxaa ay intaa ku darayaan in sarkaalka ka tirsanaa Alshabaab uu la soo goostay baabuurta ay soomaalidu u taqaan Cabdi Bilaha iyo darawalkii uu kaxeynayay.
Tan iyo markii degaanada Koonfur Galbeed uu gaaray Sheekh Muqtaar Roobow Cali Abuu Mansuur ayaa waxaa jirtay in ay isa soo dhiibayeen xubnaha Shabaab ka tirsan ee sida dhuumaaleysiga ah ku jooga magaalada Baydhabo, kuwaasi oo warar soo baxayay ay sheegayaan in Roobow uu ku cadaadinayay in ay isa soo dhiibaan.
Degmada Diinsoor ayaa ah magaalada ay rag ka tirsan Alshabaab ay imanayeen toddobaadyadii la soo dhaafay.
Alshabaab Ayaa Dil Toogasho Ah ku Fuliyey Dhalinyaro Ay ku eedeyeeyn Basaasnimo.
Madaxa Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ayaa Soo Dhoweeyay Ansixintii Miisaaniyadda Dawlada.